Kedu inddị ịzụta na 2021? Ntuziaka ịhọrọ ihe ị chọrọ | Akụkọ akụrụngwa
Ignacio Sala | | Amazon, ndị na-agụ akwụkwọ
Ruo oge ụfọdụ, akwụkwọ elektrọnik aghọọla ụzọ kachasị eji agụ akwụkwọ kachasị amasị anyị, ma ọ bụ nke ọhụụ ma ọ bụ nke ochie. Isi ihe kpatara ya bụ n'ihi nkasi obi ọ na-enye anyị ma mgbe anyị na-agụ ha ma mgbe anyị na-azụ ha.
N'ahịa anyị nwere n'aka anyị ọtụtụ ngwaọrụ iji gụọ akwụkwọ elektrọnik, nke a na-akpọ ndị na-agụ akwụkwọ, agbanyeghị, onye nrụpụta na-eweta ngwaahịa kachasị mma n'ahịa kwa afọ bụ Amazon, onye ọsụ ụzọ n'ụwa nke akwụkwọ elektrọnik. Y’oburu n’ichaghi nke oma ihe nlere anya kacha nma gi, mgbe ahu anyi ga egosi gi otu esi azụta ihe.
Ka ọ dị ugbu a, ụdị Kindle nwere ngwaọrụ anọ. N'ime oke a, anyị anaghị atụgharị uche na ọkụ ọkụ, mbadamba nkume ndị ahụ sitere na Amazon nke anyị nwekwara ike ịgụ akwụkwọ elektrọnik, ọ bụ ezie na ọ bụghị ya bụ isi ebumnuche ya, ọ bụ ezie Anyị ga-ekwukwa banyere ya maka ekele ọ na-enye anyị.
Ka afọ gafere, Amazon agafeela na-agbasawanye ọnụ ọgụgụ nke akwụkwọ elektrọnik enyere anyị aka, na ugbu a, anyị nwere ike ịchọta site na ụdị ndị bụ isi dị ka 2016 Kindle to the Kindle Oasis, ihe nlereanya nke na-enweta teknụzụ kachasị ọhụrụ na ụdị ngwaọrụ a.
1 Ụdị ihe
2 Kindle (2016) ọgbọ 8th
3 Gbasara akwukwo Paperwhite
4 Ọdịdị Omenala
5 Tụnyere nke inddị e-agụ akwụkwọ
6 Ihe karịrị otu nde akwụkwọ anyị nwere: Kindle Unlimited
7 Kindle Fire maka ihe ọ bụla ọzọ
El ọhụụ ọhụrụ, nke rutere n'ahịa iji dochie usoro 2016th nke 8 nke na-agbakwunye ọkụ n'ihu ihu, ihe nke ọgbọ gara aga na-enweghị, na nke na-enye anyị ohere ịgụ ebe na mgbe anyị chọrọ na-enweghị dabere na ọkụ ihu igwe gbara anyị gburugburu. Emere ya maka ịgụ ya na ihuenyo mmetụ dị elu yiri nnọọ ka akwụkwọ e biri ebi na dị ka ihe niile ụdị na-adịghị egosi na ọ bụla echiche.
Ihuenyo bụ sentimita 6, nwere 4 GB nke nchekwa dị n'ime, nwere akụkụ nke 160x113x8,7 mm na ịdị arọ nke gram 174, nke na-enye anyị ohere ijide ya n'aka otu aka. Ọnụahịa ya bụ euro 89,99 o dikwa na ma ocha na oji.
Kindle (2016) ọgbọ 8th
Obiọma na-enye anyị a 6-anụ ọhịa ihuenyo na-enweghị ike ìhè, ya mere isi mmalite ọkụ dị mkpa iji ya. Ihuenyo, dị ka ọtụtụ n'ime ngwaọrụ ndị a, adịghị agwụ ike ile anya, ọ bụ ihe na-emetụ n'ahụ ma ọ dịghị egosi ụdị echiche ọ bụla ọbụlagodi na ìhè anyanwụ. Dabere na ojiji anyị na-eme, batrị ahụ nwere ike izu ole na ole n'otu ụgwọ.
Na ụdị Kindle (2016) ọ dị na agba ojii na ọcha maka naanị euro 69,99, na ọ bụ ngwaọrụ kachasị mma ị nwere ike ịchọta n'akụkụ a iji banye na uru nke akwụkwọ elektrọnik na-enye anyị, ma ọ bụrụ na ịmabeghị na ọ nwere ike ịbụ ụzọ ọhụrụ gị si eri ọdịnaya.
Kindle Paperwhite bụ Amazon nke kachasị mkpa na ndị na-agụ akwụkwọ ntanetị. Na mgbakwunye, ọ nwere ihuenyo nke na-enye mkpebi nke 300 pp na, dị ka ụdị niile, anaghị egosipụta ìhè ọ bụla. Ebe nchekwa ahụ abawanyela ma e jiri ya tụnyere ọgbọ gara aga (8 na 32 GB) na site na otu ụgwọ anyị nwere obodo kwụụrụ onwe ya ruo izu.
Otu n'ime akwụkwọ akụkọ kachasị ọhụrụ ọ na-enye anyị ma e jiri ya tụnyere ụdị ndị gara aga bụ nguzogide mmiri, yabụ anyị nwere ike jiri ya nke ọma na bat ahụ, na ọdọ mmiri ma ọ bụ n'akụkụ osimiri ekele maka nchedo IPX68 ya. Ihuenyo na-enye anyị ọkụ nke aka ya, dị mma maka ojiji n'ọnọdụ ọnọdụ ihu igwe ọ bụla.
Ọnụahịa nke Akwụkwọ Kindle na 8 GB nke nchekwa na njikọ Wi-Fi bụ euro 129,99, mgbe ụdị 32 GB na-aga 159,99 euro. Anyi nwere ikike nke 32 GB nke nwere 4G n'efu maka euro 229,99.
Zụrụ akwụkwọ edemede nke akwụkwọ
El Ọdịdị Omenala Ọ bụ otú ahụ ka Amazon e-agụ na kasị ibu ihuenyo, 7 sentimita asatọ kpọmkwem. Mkpebi ihuenyo ruru 300 dpi nke na-enye oke nkọ ma na-enye ohere Gosi okwu 30% n’otu peeji.
Dị ka Kindle Paperwhite, ọ bụ ihe na-enweghị mmiri site na nchedo IPX68, ihuenyo anaghị egosipụta echiche ọ bụla ma nwee ọkụ nke ya iji nwee ike ịgụ kpamkpam n'ọchịchịrị na-enweghị ike ọgwụgwụ anya gị. Nke a bụ ihe nlereanya na na-enye anyị obere osisi, ewezuga n'akụkụ aka nri nke ihuenyo ahụ, ebe egosipụtara etiti ka ukwuu iji nwee ike iji ya na otu aka.
Ọnụahịa nke Kindle Oasis nke 8 GB nke nchekwa na njikọ Wi-Fi bụ euro 249,99, mgbe ụdị 32 GB na-aga 279,99 euro. Anyi nwere ikike nke 32 GB nke nwere 4G n'efu maka euro 339,99.
Tụnyere nke inddị e-agụ akwụkwọ
Nlereanya Ọdịdị ọhụrụ Gbasara akwukwo Paperwhite Ọdịdị Omenala
Ahịa Site na EUR 89.99 Site na EUR 129.99 Site na EUR 249.99
Ihuenyo 6 "n'echeghi echiche 6 "n'echeghi echiche 7 "n'echeghi echiche
Ike 4 GB 8 ma ọ bụ 32 GB 8 ma ọ bụ 32 GB
Mkpebi 167 ppp 300 ppp 300 ppp
N'ihu ihu 4 IGBO 5 IGBO 12 IGBO
Izu nke nnwere onwe Si Si Si
Nhazi ihu na-enweghị njedebe Mba Si Si
IPX8 mgbochi mmiri Mba Si Si
Sensọ maka ngbanwe ọkụ na-akpaghị aka Mba Mba Si
Button atụgharị bọtịnụ Mba Mba Si
Njikọ Wifi WiFi WiFi ma ọ bụ wifi + njikọta mkpanaka efu WiFi ma ọ bụ wifi + njikọta mkpanaka efu
Ibu ibu 174 grams WiFi: 182 grams - wifi + 4G LTE: gram 191 Wifi: 194 gram; wifi + 3G: gram 194
Akụkụ X x 160 113 8.7 mm X x 167 116 8.2 mm 159 x 141 x 3.4 - 8.3 mm
Ihe karịrị otu nde akwụkwọ anyị nwere: Kindle Unlimited
Achọpụtabeghị Amazon maka ịnwa ịme ego na ngwaọrụ ya. N'ọtụtụ oge, ọ na-ere ngwaahịa eletriki ya na ọnụ ahịa ebe ihe ọ chọrọ bụ ijigide onye ọrụ yana na, na nke a, zụta akwụkwọ ndị ahụ n'elu ikpo okwu gị.
Ọdịdị Unlimited, na-etinye n'aka anyị ihe karịrị otu nde akwụkwọ maka mgbanwe kwa ọnwa nke euro 9,99, akwụkwọ ndị anyị nwere ike. Na mgbakwunye, ọ bụrụ na anyị bụ ndị ọrụ gọọmentị, anyị nwere akwụkwọ ndekọ pere mpe nke aka anyị, mana kpamkpam n'efu site na Primegụ Ọgụgụ.
Kindle Fire maka ihe ọ bụla ọzọ
Ezinụlọ Kindle Fire nwere ugbu a ụdị abụọ 7-anụ ọhịa na 8-anụ ọhịa. Ezubere ha iji rie ọdịnaya nke ọtụtụ ọdịnaya site na Amazon Prime Video, ọrụ nkwanye vidiyo nke Amazon, ọ bụ ezie na anyị nwekwara ike iji ya sọfụ ịntanetị, gụọ netwọk mmekọrịta yana n'ezie ịgụ akwụkwọ ọkacha mmasị anyị.
Uru ya bara ezigbo mma, ya mere, anyị enweghị ike ịzụta ha na mbadamba ihe dị elu nke Samsung na Apple na-enye anyị. Ọnụ ya maka ụdị 7-inch bụ 69,99 euro maka ụdị 8 GB na 79,99 euro maka ụdị 16 GB. Versiondị nke nwere nnukwu ihuenyo, ụdị 8-inch, dị ọnụ ahịa na 99,99 euro maka ụdị 16 GB na 119,99 maka ụdị 32 GB.
Zụrụ 7-anụ ọhịa Kiundle Fire Zụta 8-inch Kindu Fire HD
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Amazon » Esi zụta Ihe Nlekọta
Conga 3090 agụụ Cleaner nyochaa